Nezvedu - RICON WIRE MESH CO., LTD
RICON waya Mesh CO., LTD
Ricon waya mesh co., Ltd yakavambwa mu2,000 ine yakanyoreswa capital yeUS100,0000.
Iyo kambani iri muAnping County, Hebei, China, inozivikanwa seyavo mesh zvigadzirwa.Tine makore makumi maviri neruzivo rwekugadzira uye kutanga bhizimusi rekutengesa kunze kubva muna 2004.Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira waya yakakosheswa, waya yakasviba yakasungwa, waya isina simbi, tambo dzekurima, waya dzakarukwa, waya dzakakomberedzwa , chikafu, kurapwa kwetsvina uye mamwe maindasitiri.
Hunhu uye kugona ndiko kutsvaga kwedu kwekusingaperi uye nzira yedu yekurarama mune yemakwikwi nyika! Kutenda kwedu ndekwe kupa vatengi nemakwikwi mutengo, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kukurumidza kuendesa, kukurumidza uye basa rinoshanda.
Chingava rukudzo rukuru kushandira pamwe newe!
Zvigadzirwa / Sevhisi: kwakakurudzira waya, nhema nhema yakaiswa waya, isina simbi waya, waya dzekurima, dzakasungwa waya pajira riya, hexagonal waya pajira riya, gabion nettins, ngetani link fenzi, Washington City Offices pajira riya, mosquito mambure, Stainless simbi waya pajira riya, rakawedzerwa pajira riya uye akawanda marudzi echienzi zvigadzirwa.
Rudzi rwebhizinesi: Mugadziri uye mutengesi
Chigadzirwa Chigadzirwa:Iron waya uye Iron Wire Mesh
Vashandi Vese: 50 ~ 100
Nheyo (Miriyoni US $):100,0000
Gore rakasimbiswa: 2000
Chitupa: ISO9001, CE, Test Report
Kero Kambani: Maindasitiri Zone, Anping County, Hebei, China
Kwete yeMakambani Ekugadzira : 20
Kwete yeQC Vashandi: 5 -10 Vanhu
OEM Services Yakapihwa: Ehe
Saizi yeFekitori (Sq.meter): 30,000 Mativi Mamita
Fekitori Nzvimbo: Industrial Zone, Anping County, Hengshui Guta, Hebei Province, China